विश्वभर ४ करोड कोरोना संक्रमित निको भए, हेर्नुहोस् कुन देशमा कति संक्रमित र मृत्यु ? Canada Nepal
विश्वभर ४ करोड कोरोना संक्रमित निको भए, हेर्नुहोस् कुन देशमा कति संक्रमित र मृत्यु ?
काठमाडौं - कोरोनाभाइरसका कारण हालसम्म विश्वका धरै देशहरु प्रभावित भइरहेका छन् । विश्वका विभिन्न देशमा हरेक दिन कोरोनाको संक्रमणबाट ज्यान गुमाउने र संक्रमितको संख्या बढ्दै गइरहेको छ । तर कोरोना संक्रमित निको पनि हुँदै गइरहेका छन् ।
वर्ल्डोमिटर्सको तथ्यांक अनुसार हालसम्म विश्वभर कोरोना संक्रमितको संख्या ५ करोड ७९ लाख ९ हजार ९ सय ९१ पुगेको छ भने कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या १३ लाख ७७ हजार ७ सय ४५ पुगेको छ ।
त्यस्तै हालसम्म विश्वमा ४ करोड १ लाख ८ हजार २ सय ५९ कोरोना संक्रमित उपचारपछि निको भइसकेका छन् ।
त्यस्तै अमेरिकामा मात्र कोरोनाको संक्रमणबाट २ लाख ६० हजार २ सय ८३ जनाको मृत्यु भएको छ भने संक्रमितको संख्या १ करोड २२ लाख ७४ हजार ७ सय २७ पुगेको छ । त्यसैगरी निको हुनेको संख्या ७३ लाख १६ हजार ३ सय २३ पुगेको छ ।
त्यस्तै ब्रजिलमा कोरोनाको संक्रमणबाट मुत्यु हुनेको संख्या १ लाख ६८ हजार ६ सय ६२ पुगेको छ भने संक्रमितको संख्या ६० लाख २० हजार १ सय ६४ पुगेको छ । निको हुनेकोको संख्या ५४ लाख २२ हजार १ सय २ रहेको छ ।
त्यस्तै अर्को देश रसियामा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या ३५ हजार ३ सय ११ पुगेको छ भने संक्रमितको संख्या २० लाख ३९ हजार ९ सय २६ पुगेको छ । निको हुनेको संख्या भने १५ लाख५१ हजार ४ सय १४ पुगेको छ ।
मंसिर ६, २०७७ शनिवार १०:३५:५३ बजे : प्रकाशित
मनागउ - निकारागुवामा ट्रक दुर्घटना हुँदा १७ जनाको मृत्यु भएको छ । मंगलबार निकारागुवाको मोन्टानिटा भन्ने स्थानको राजमार्गमा भएको उक्त दुर्घटनामा १७ जनाको मृत्यु भएको हो भने अन्य २५ जना घाइते भएको त्यहाँका स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरुले जनाएका छन् ।
सञ्चारमाध्यमहरुमा यात्रुहरु लिएर हिँडेको ट्रक दुर्घटनामा परेको र त्यसमा रहेका यात्रुहरुको मृत्यु भएको बताइएको छ ।
दुर्घटनामा घाइते भएकाहरुको अस्पतालमा उपचार जारी रहेको बताइएको छ । उक्त दुर्घटनाको अनुसन्धान शुरु भएको जनाइएको छ ।
मंसिर ९, २०७७ मंगलवार २२:१७:५९ बजे : प्रकाशित
बिल गेट्सलाई पछि पार्दै एलन मस्क बने विश्वको दोस्रो सबैभन्दा धनी व्यक्ति
काठमाडौँ। स्पेसएक्स का प्रमुख कार्यकारी अधिकारी र टेस्लाका प्रमुख एलन मस्क, माइक्रोसफ्टका संस्थापक बिल गेट्सलाई पछि पार्दै विश्वको दोस्रो सबैभन्दा धनी व्यक्ति बनेका छन्।
४९ वर्षीय मस्क कुल सम्पत्ति अहिले १२७ दशमलव ९ अर्ब अमेरिकी डलर भएको छ। टेस्लाको सेयरमा भएको ठुलो मुनाफाका कारण उनको कुल सम्पत्ति ७ दशमलव २ अर्ब डलरले वृद्धि भएको हो।
कोरोना भाइरसका कारण विश्वको अर्थतन्त्र ठप्प भएको बेला एलन मस्कलाई यो साल निकै फाइदाजनक देखियो। उसले यो वर्ष मात्र १०० अरब डलर कमाएका छन्।
ब्लूमबर्गको इन्डेक्सका अनुसार यस वर्षको जनवरी महिनामा विश्वको सबैभन्दा धनी व्यक्तिको सुचीमा ३५औँ स्थानमा राखिएको थियो। तर, सालको अन्त्य तिर आइसक्दा उनी विश्वको दोस्रो सबैभन्दा धनी व्यक्ति बनेका छन्।
मंसिर ९, २०७७ मंगलवार १८:०४:०६ बजे : प्रकाशित
# सबैभन्दा धनी व्यक्ति
काठमाडौँ। साउदी अरबस्थित एउटा सरकारी अस्पतालमा बिरामीको शल्यक्रिया गर्न लागेका एक चिकित्सकको मृत्यु भएको छ। साउदी सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएअनुसार हाडजोर्नीसम्बन्धी शल्यक्रिया गर्न गएका बेला ती चिकित्सकको आफैँ अस्वस्थ भएका थिए।
अल वतन दैनिक वेवसाइटले खामिस मुशैट सिभिल हस्पिटलमा डा. महदी अल इमारीलाई हृदयाघात भएको उल्लेख गरेको छ। शल्यकक्षमा असहज भएको देखेपछि सहकर्मीहरूले ती चिकित्सकको मुटु जाँच्न लगाएका थिए ।
शल्यक्रिया गर्ने अडान
इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम गरिएपछि उनले बिरामीको अपरेशन गरे कि गरेनन् भन्ने स्पष्ट भएको छैन। अस्पतालका अर्थोपेडिक विभागका प्रमुख डा. मजिद अल शहरीलाई उद्धृत गर्दै अल वतनले लेखेको छ, "एक बिरामीको शल्यक्रिया गर्न उपस्थित भएका इमरीलाई हामीले थकित भएको र पेटको पीडाले सताएको सङ्केत देख्यौँ।"
इमरीले सुरुमा आफ्नो परीक्षण गर्न अस्वीकार गरेको र बिरामीको शल्यक्रिया गर्ने कुरामा जोड दिएको कुरा विभाग प्रमुख शहरीले बताएका छन्। अन्तत: उनलाई इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम गर्न मनाइयो। त्यसमा उनलाई हृदयाघात भएको देखिएको अस्पतालले जनाएको छ।
"आफ्नो कर्तव्य निर्वाहका क्रममा उनको मृत्यु भयो," गल्फ न्यूज वेवसाइटका अनुसार डा. शहरीले भनेका छन्। यो समाचार बीबीसी नेपाली सेवाबाट साभार गरिएको हो।
मंसिर ९, २०७७ मंगलवार ११:३७:०५ बजे : प्रकाशित
बीबीसी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले राष्ट्रपति निर्वाचित जो बाइडनले कार्यभार सम्हाल्नका निम्ति औपचारिक सत्ता हस्तान्तरण सुरु हुनसक्ने स्वीकार गरेका छन्। उनले त्यसका निम्ति जिम्मेवार सङ्घीय निकाय जनरल सर्भिसेस् एड्मिन्ट्रेशन (जिएसए) लाई 'गर्नुपर्ने आवश्यक काम गर्न' सिफारिस गरेको बताए।
तर चुनावको परिणामविरुद्ध आफ्नो कानुनी लडाइँ जारी रहने ट्रम्पको भनाइ छ। जिएसएले पनि बाइडनलाई 'स्पष्ट विजेता'को रूपमा आफूले स्वीकार गरेको जनाएको छ। अमेरिकी राज्य मिशिगनमा राष्ट्रपति निर्वाचित जो बाइडनको जित औपचारिक रूपमा प्रमाणित भएसँगै मत परिणामलाई चुनौती दिने डोनल्ड ट्रम्पको प्रयासमा गम्भीर धक्का लागेको छ।
जिएसएले बाइडन समूहलाई प्रक्रिया सुरु गर्ने भनी जानकारी दिएपछि ट्रम्पले ट्वीट गरेका छन्। ट्रम्पद्वारा नियुक्त प्रशासक इमिली मर्फीले राष्ट्रपति निर्वाचित बाइडनका निम्ति ६३ लाख डलरको कोष उपलब्ध गराउने बताएकी छन्। उनले प्रक्रियागत ढिलाइ गर्न आफूलाई ह्वाइट हाउसबाट कुनै दबाव नआएको जनाएकी छन्।
बाइडनको समूहले पनि महामारी र राष्ट्रिय सुरक्षाका मुद्दामा सरकारी अधिकारीहरू सँगको बैठकहरूपछि सत्ता हस्तान्तरण सुरु हुने कुरा वक्तव्यमार्फत् जनाएको छ। उसले मर्फीको पत्रको स्वागत गरेको छ।
ट्रम्पलाई धक्का लागेको मिशिगन राज्यको मत परिणाम घोषणालाई अन्तिम रूप दिन त्यहाँको दुईमध्ये एक रिपब्लिकनले दुईजना डेमोक्र्याटलाई साथ दिएका थिए। अर्का रिपब्लिकन भने त्यसबाट अलग्गिएका थिए। ट्रम्पको कानुनी समूहले अझै पनि मिशिगनको परिणामलाई चुनौती दिने बताएका छन्। ट्रम्पकी कानुनी सल्लाहकार जेना एल्लिसले प्रमाणीकरणलाई समान्य प्रक्रियागत कदम भनेकी छन्।
उनले भनिन्, "अन्तिम परिणाम वैध र स्वच्छ भएको कुरामा अमेरिकीहरू सुनिश्चित हुनुपर्छ।" तर समय घर्किँदै गइरहेको छ। डिसेम्बर १४ मा बाइडनको जित अमेरिकी इलेक्टरल कलेजबाट प्रमाणित हुँदैछ।
बाइडनका भावी सहकर्मीको अनुहार
बाइडनले ज्यानुअरी २० मा शपथ लिएपछि आफूले सरकारमा प्रमुख भूमिका दिने चाहेका व्यक्तिहरूको नाम चयन गर्न सुरु गरेका छन्। पूर्वविदेश मन्त्री जोन केरीले जलवायुसम्बन्धी विशेष दूतको भूमिका निर्वाह गर्ने छन्।
चार वर्षअघि अमेरिकाको तर्फबाट उनैले प्यारिस सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए। तर ट्रम्प उक्त सम्झौताबाट पछि हटेका थिए। यसअघि सशक्त रूपमा अन्तर्राष्ट्रियवादमा विश्वास गर्ने एन्टोनी ब्लिङ्केनको नाम विदेशमन्त्रीको रूपमा प्रस्तुत गरिसकिएको छ।
मंसिर ९, २०७७ मंगलवार ११:२४:३६ बजे : प्रकाशित
# सत्ता हस्तान्तरण
# कानुनी लडाइँ
भारतमा कोरोना संक्रमित घट्दै
काठमाडौं । भारतमा पछिल्लो समय कोरोनाभाइरसको संक्रमण घट्दै गइरहेको छ भने निको हुनेको संख्या बढ्दै गइरहेको छ ।
वर्ल्डोमिटर्सको तथ्यांक अनुसार यो समाचार तयार पार्दासम्म पछिल्लो २४ घण्टामा भारतमा ३७ हजार ४ सय १० जना कोरोना संक्रमित फेला परेका छन् । यससँगै भारतमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या ९१ लाख ७७ हजार ७ सय २२ पुगेको छ ।
त्यस्तै पछिल्लो २४ घण्टामा भारतमा ४ सय ८१ जनाको कोरोनाबाट मृत्यु भएको छ । यससँगै भारतमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या १ लाख ३४ हजार २ सय ५४ पुगेको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा भारतमा ४२ हजार १ सय ३१ जना कोरोना संक्रमित निको भएका छन् ।
त्यस्तै हालसम्म ८६ लाख ३ हजार ५ सय ७५ कोरोना संक्रमित उपचारपछि निको भइसकेका छन् । भारतको महाराष्ट्र राज्य, तमिल नाडु, मुम्बइ, गुजरात लगायतका ठुला शहरहरुमा कोरोना सक्रमितको संख्या बढी रहेका छन् ।
मंसिर ९, २०७७ मंगलवार ०९:३४:५३ बजे : प्रकाशित